Warshad Xamuul ah - Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha
Mabaadi'da shaqada ee mashiinka telescopic-rullaluistemadka aan xawliga lahayn: mashiinka wax lagu duubo ee telescopic-ka iyo kan caadiga ah ee alaab-ridaha ah waa isku mid qalab gaadiid oo isdaba-joog ah oo u adeegsada suunka is-beddelka rogroga sida sheyga qaadista iyo qaybta jarista si uu ugu rarro maaddada iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa suunka xamuulka. Marka la barbardhigo kuwa xamuulka qaada ee caadiga ah, waxay ku dareysaa aaladda wax lagu keydiyo suunka, aaladda suuneysa iyo qalabka kale. Marka gaariga xiisaddu u dhaqaaqdo dhamaadka dabada, suunka wuxuu galayaa suunka ...
Wareegtada Raceway waxay ku habboon tahay gudbinta dhammaan noocyada sanaadiiqda, bacaha, boodhadhka iyo alaabada kale. Alaabada Jumlada, alaabada yar yar ama alaabada aan caadiga ahayn waxay u baahan yihiin in la dhigo santuuqyada ama sanaadiiqda wareejinta. Waxay qaadi kartaa hal shey oo culus ama waxay qaadi kartaa culeys weyn oo saameyn ah. Way fududahay in la isku xiro oo la shaandheeyo khadadka durbaannada. Waxay abuuri kartaa nidaam gaadiid saad adag oo wata khadad farabadan oo durbaanno ah iyo gaadiidley kale ama mashiinno gaar ah si loo buuxiyo shuruudaha geeddi-socodka kala duwan. Rullaluistemadka isdabajooga ...
Wax soo saarka Professional of mashiinada gaadhsiinta, conveyor mesh conveyor, qaylo. Suunka xambaarka iyo qaadista suunka wax lagu qaado ee qaabka suunka gudbiyaha ee PVC, suunka mesh birta ah, suunka saxanka silsiladda, gaadiidka tooska ah iyo qaadista ayaa noqon kara, wiishka waxaan sidoo kale ugu yeeraynaa fuulista fuulista, sidaas darteed suunka xambaaraha waxaa lagu dari karaa iyada oo la kala qaadayo iyo dhinaca baffle. si looga hortago daadashada dhinaca iyo siibashada. Foomamka qaabdhismeedka waxaa ka mid ah: gaarsiinta qumman ee toosan, qaadista qaadista qaadista, iwm.
Faa'iidooyinka fuulista qalabka silsiladda: 1. Qiimo jaban, rakibid iyo dayactir ku habboon, qaab-dhismeed fudud, xawaaraha gudbinta sare iyo xasilloonida. Gawaarida suunka quudinta degdega ah, rarka mobilada iyo soo dejinta xambaaraha suunka ilaaliyaha, 2. Isgaarsiinta xasiloon, ma jiro dhaqdhaqaaq qaraabo ah oo udhaxeeya maaddada iyo suunka xambaaraha, waxay ka fogaan kartaa waxyeelada gaadhiga; marka la barbardhigo kuwa kale ee wax qaada, buuqku wuu yar yahay, wuxuu ku habboon yahay jawiga shaqada Heer xasilloon ayaa loo baahan yahay. Lugaha yaryar waa giraangiraha adag ee adag ...
Gawaarida qalooca waxay la kulmi karaan shuruudaha gaadiidka safka kaliya ee calaamadeynta cabitaanka, buuxinta, nadiifinta iyo qalabka kale, sidoo kale safaf keli ah ayey ka dhigi karaan safaf badan waxayna si tartiib ah u socon karaan, si ay u soo saaraan awooda keydinta oo ay u buuxiyaan shuruudaha quudinta ballaaran ee jeermiska, madal lagu keydiyo dhalada iyo mashiinka dhalada qabow. Waxaan ka dhigi karnaa madaxa iyo dabada laba silsiladood oo xambaarsan silsilad isku dhafan oo is dul saaran, si dhalada (awooddu) jirku ugu jiro xaalad firfircoon Waxay ku qancin kartaa cadaadiska a ...
Hordhac Brand Shirkaddu waxay ku takhasustay soo-saarka mashiinka wax-soo-saarka warshadaha, khadka isku-xidhka otomaatiga ah, suunka wax-soo-saaraha, saxan-wadaha silsiladda, khadadka birta korontada ku shaqeeya, khadadka duudduuban ee aan korantada lahayn, khadka ganaaxa, khadka wax-soo-saarka silsiladda xawaaraha, khadka wax-soo-saarka silsiladda culus. , Feejignaan faseex ah, khadka gabowga, iyo qalab kale oo aan caadi ahayn. faahfaahinta sheyga xuduudaha farsamada ee o-suunka gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida: loogu talagalay iyadoo loo eegayo culeyska gudbinta, xawaaraha gudbinta ama macaamiisha dema ...